Abanjwa ngophondo amawele ayengenele olwama-Idols | News24
Abanjwa ngophondo amawele ayengenele olwama-Idols
eThekwini - Sekuqubuke izikhalazo ngendlela uhlelo lwama-Idols luqhutshwa ngalo kanye nokucwaswa kwabansundu.
Lezi zikhalazo zivela ngemuva kokuwina kwentokazi uPaxton Fielies.
Le ntokazi ineminyaka engu-17 ubudala kanti yangenela lo mncintiswano ngesikhathi abama-Idols behambele amadolobha ahlukahlukene befuna umculi ozodla umhlanganiso kulo nyaka.
Njengoba kuwine le ntokazi yaseKapa, sekuvele kwaba muncu kubanye ababukele abakhala ngokungabi bikho kweqiniso ngendlela okwenzeka ngayo ngamawele axoshwa engenaphutha.
Ngonyaka ka-2013 linamawele amabili u-Anele noNeliswa Mxhakaza aseThekwini angenela lo mncintiswano futhi kwakubonakala ukuthi ayethandwa kakhulu futhi ecula kamnandi kusukela enza inhlolokhono yokucula aze adlulela esigabeni esilandelayo.
Yize ayecula kahle kakhulu lawa mawele futhi namajaji ayezisholo ngokwawo ukuthi likhulu ithalente kuwona, axoshwa ngomzuliswano wokukhetha abangu-16 abahamba phambili.
OLUNYE UDABA:Ubuhlungu benhliziyo obenze 'wayocasha' ohlulwe kuma-Idols
Ngokusho kwamajaji, lawa mawele axoshwa ngoba ayesemancane,16, ukuba angaqhubeka nalolu hlelo abona kungcono aqhubeke nesikole.
Umbuzo uthi yini eyayihlukile phakathi kwalawa mawele kanye noPaxton, kwazise naye yintokazi esencane futhi esafunda isikole.
Ungenele lo mncintiswano amajaji azi kahle ukuthi iminyaka yakhe mincane kodwa walithola ithuba eliphelele.
Ngo-2013 ngesikhathi abamaphepha bebuza ngalokho, owayekhulumela lolu hlelo ngaleso sikhathi uLani Lombard wathi:“Ukuhlehlisa isinqumo samajaji ngeke kubukeke kahle kubo bonke abantu ababambe iqhaza kulolu hlelo. Lokhu kungabukeka sengathi kukhethwa iphela emasini."